बच्चालाई प्रशस्त स्तनपान गराउँदा आमालाई के फाइदा ? - Bidur Khabar
विदुर खबर २०७५ साउन २१ गते १:४८
‌गंगाराज अर्याल, हरेक वर्ष अगष्त महिनाको १–७ तारिखसम्म विभिन्न नाराका साथ मनाईने स्तनपान सप्ताह आजदेखि एक हप्तासम्म नेपालमा पनि ‘स्तनपान : जीवनको आधार’ भन्ने नाराकासाथ विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइँदै छ । विश्वभरीका शिशु तथा बालबालिकाको सुरक्षा, शारीरिक तथा मानसिक बृद्धि–विकास र स्वास्थ्यको सुधारका लागि स्तनपानको प्रबद्र्धन सम्बन्धि सहयोगकालागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष लगायत अन्य संघ–संगठनको आव्हानमा सन् १९९० देखि हरेक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह मनाउन शुरु गरिएको हो।
– सन् २०१६ को अध्ययन अनुसारविश्वका करीव १५५ करोड ५ वर्षमुनिका बालबालिका बामपुड्के (उमेर अनुसार होचो) भएको, ५२ करोडजति लुरे (उचाई अनुसार पातलो) र ४१ करोडजतिकुपोषण (बढी तौल)भएको पाइएको थियो ।
– कुपोषणका कारणले विश्वका ४५ प्रतिशतबालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
– बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धि सम्मेलनद्वारा गरिएको धोषणा अनुसार “असल पौष्टिक पदार्थ हरेक शिशु तथा बालबालिकाको अधिकार” घोषणा गरिएको छ।
– विश्वका ६ महिनाका शिशुमध्ये करीव ४० प्रतिशतले मात्र प्रचुर मात्रामा स्तनपान गरेका छन्।
– जन्मेदेखि २३ महिनासम्म सम्पूर्ण शिशुले स्तनपान गर्न पाएको खण्डमा विश्वभरका ५ वर्षमुनिका ८ लाख २० हजार बालबालिकालाई बचाउन सकिन्छ।
– नेपालमा २०७३/७४ को प्रतिवेदन अनुसार ६ महिनासम्मका जम्मा २५ प्रतिशत र २३ महिनासम्मका जम्मा ६३ प्रतिशत शिशुको मात्र बृद्धि अनुगमन गरिएको देखिन्छ । जुन अघिल्लो वर्ष भन्दा घटेको छ।
– नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार ५ वर्ष मुनीका बालबालिका मध्ये ३६ प्रतिशत बामपुड्के, १० प्रतिशत उचाइ अनुसार दुब्लो (लुरे), २७ प्रतिशत उमेर अनुसार कमतौल र २४ प्रतिशत जन्मदा कमतौल भएका, ६८ प्रतिशत जति ६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिका र ५३ प्रतिशत जति ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्त अल्पता भएको पाइएको छ भने ४६ प्रतिशत गर्भवतीमा रक्तअल्पता पाइएको छ । साथै ६६ प्रतिशत आमाहरुले मात्र आफ्ना शिशुलाई प्रचुर मात्रामा स्तनपान गराउने गरेका छन्।
– सर्वप्रथम गर्भवतीको स्तनको मुन्टो धसिएको, सानो हुन सक्छ । त्यसो भएमा आफैँ धसिएको मुन्टोलाई तेल लगाई मालिस गरेमा विस्तारै सामान्य अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । यति गर्दा नआएमा नजिकका स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाउनु पर्दछ।
– स्तनपान गराउँदा आमाको स्तनको मुन्टो (निपल) वरीपरीको कालो भाग समेत शिशुको मुखभित्र पसेको हुनु पर्दछ । तवमात्र शिशुले अघाउञ्जेल दूध खान पाएको मान्न सकिन्छ ।
– आमाले आरामकासाथ बसेर मात्र दूध चुसाउनु पर्दछ । किनभने शुरुको पहिलो दूध पातलो हुन्छ । बाक्लो दूध आउन एकछिन समय लाग्छ । त्यसैले एकपटकमा कम्तीमा १५ मिनटसम्म पालैपालोसंग दूध चुसाउनु पर्दछ । किनभने आमाले काम वा लाजले गर्दा हतारमा केही मिनेट जति चुसाएर छोडिहाल्ने गरेमा आमाको पहिलो पातलो दूधमात्र चुस्न पाएको शिशुले बाक्लो दूध आउने बेला स्तन चुस्न नपाई अघाउनै पाउँदैन । कम्तीमा १५ मिनट दूध चुसाएपछि घोप्टो पारी शिशुलाई टाँसेर पिठ्युमा थमथमाएमा शिशुले डकार्छ ।अनिशिशु अघाएको हुन्छ र वान्ता गर्ने डर पनि हुँदैन।
– स्तनपान गराउने आमाले जहाँ,जसरी भएपनि टुसुक्क बसेर, सुतेर वा उठेरै स्तनपान गराई शिशुलाई सुुताई छाड्ने चलन पनि देखिन्छ । यसो गर्नु कदापि ठीक होइन । आमाले शिशुको कानमा दूध नपर्ने गरीस्तनपान गराउनु पर्दछ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखा निरीह र यिनै संस्थाको प्रस्ताव मञ्जुर गर्ने साछी वनेको छ । त्यसैको फलस्वरुप स्वास्थ्य सेवा विभागको २०७३/७४ को बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ६ महिनासम्मका जम्मा ६३ प्रतिशत शिशुको मात्र बृद्धि अनुगमन गरिएका,े ३२ प्रतिशत आमाहरुले मात्र सही तरीकाले स्तनपान गराउने गरेको पाईएको छ ।त्यसकारण सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको आव्हानमा सन् १९९०देखि हरेक वर्ष अगस्तको १ देखि ७ तारिखलाई नेपालमा पनिविश्व स्तनपान सप्ताहको रुपमा मनाइँदै आएको छ । तर वर्षको एक हप्ताको कार्यक्रमभएपनि अधिराज्य भरीनै ब्यापक गरिनु पर्नेमा युनिसेफ, युएसआईडि÷सुआहारा कार्यक्रमले नेपालमा काम गर्न थालेको वर्षौ वितिसक्दा पनि आ.व. २०७२÷७३ भन्दा गतवर्षमा पोषण कार्यक्रमका हरेक सूचकाङ्क घटेका छन्। केवल शहरी क्षेत्रमा मात्र पोषण कार्यक्रम बढी केन्द्रित भएको अनुभव तथा प्रतिवेदनले देखाएका छन् । तर पोषण कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन।